10/24/14 ~ MM Daily Star
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုတွင် ပတ်သက်ခြင်း မရှိဟု မိဘများန...
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဖို့တပ်မတော်က ဘာကြောင့် စိုးရိ...
သတင်းထောက်လေ... ?? သူပုန်လော..... ??
15:23 သတင်း No comments
လိပ်ကျွန်း လူသတ်မှုတွင် စွပ်စွဲခံ မြန်မာ ၂ ဦးက သူတို့သည်အမှုနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘဲ ညှင်းပမ်း နိုပ်စက်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ဘာသာပြန်လွဲမှားမှုများကြောင့်သာ ၀န်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ ကော့စမွေ အကျဉ်းထောင်တွင် မိဘများနှင့်မြန်မာအဖွဲ့ ရှေ့တွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
ကော့စမွေအကျဉ်းထောင်သို့ လိုက်ပါသွားသည့် မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ ဦးမင်းဦးက“သူတို့ လုံးဝငြင်း တယ်၊ ဒီကိစ္စမှာ ဘာမှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိဘူး၊ အဲဒီနားမှာ ဂစ်တာတီးမိတယ်၊ အဲဒါနဲ့ပဲ CCTVမှာ ဓာတ်ပုံ တွေပြပြီး ရဲတွေက သူတို့ကို ဖမ်းပြီး၊ ညဉ်းပမ်းနိုပ်စက်တယ်၊ ဖြေရင် ဘယ်လောက်မှကြာကြာမနေရဘူး ငါတို့ ကူညီမယ်ပြောလို့ ၀န်ခံရတယ်”ဟု ဆိုသည်။
သူတို့လုံးဝ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ အသက်အန္တရာယ်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်သည့်အတွက် ၀န်ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးမင်းဦးက ဆက်ပြောသည်။
အဆိုပါ မြန်မာလူငယ် ၂ဦးမှာ မိဘများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ၀မ်းသာအားရဖြစ်နေပြီး၊ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းမရှိ ကြောင်းသိရသည်။
“သူတို့ပြောတာက အရမ်းရှင်းတယ်၊ အမေ ကျနော်တို့ အသက်သာ အသေခံမယ်၊ ကျနော်တို့လုပ်တာမဟုတ် ဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘာသာပြန်ကတဆင့် ခြိမ်းခြောက်တယ် အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်တို့မဖြေရင် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက် ရှိနေလို့ ဖြေလိုက်တယ်၊ တရားရုံးမှာမှ အဖြစ်မှန်ကို ထွက်ဆိုမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီး ဖြေပေးလိုက်တာ” ဟု မိဘများနှင့် ပြောဆိုကြောင်း ဦးမင်းဦးက ဆက်ပြောသည်။
ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးစဉ် ညဉ်းပမ်းနိုပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း ဆက်လက်ပြောသည်။
မြန်မာလူငယ် နှစ်ဦး၏ ပြောဆိုချက်များကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသည့် ထိုင်းရှေ့နေများက ရေးမှတ်ယူကာ ဤအမှုတွင် မှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မိဘများ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကော့စမွေ မြို့နယ်တရားစီရင် ရေး ရုံးသို့ တရားဝင် သွားရောက်လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာလူငယ် ၂ဦး၏ မိဘများ အပါအ၀င် မြန်မာသံရုံး တာဝန်ပေးခြင်းခံရ သည်သူများ စုစုပေါင်း ၁၃ ဦးသွားရောက်တွေ့ဆုံသည်ဟု သိရသည်။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဖို့တပ်မတော်က ဘာကြောင့် စိုးရိမ်နေရသလဲ …???
15:22 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
အတင်းအဓမ္မ ပြင်ဆင်ခိုင်းနေတဲ့သူတွေဟာ …
ဒီပုဒ်မ ၄၃၆ ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့…
ဒီပုဒ်မ ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းတွေကို …
သေချာ သိရှိနားလည်မှ …
ဒီပုဒ်မကို အမှန်တကယ်ပြင်ဆင်နိူင်ဖို့ အတွက် …
လက်တွေ့ ကျတဲ့နည်းလမ်းကို …
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ….
ပုဒ်မ ၄၃၆ ဟာ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ …
လက်ရှိ အခြေခံဥပဒေကို …
တပ်မတော် ရဲ့ သဘောဆန္ဒ မပါဘဲ …
ပြင်ဆင်လို့ မရအောင် လုပ်ထားတဲ့ ပုဒ်မပါပဲ …
သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့….
နားမလည်နိူင်စရာ စဉ်းစားရ ခက်ခဲတဲ့…
မေးခွန်းတစ်ချို့ ပေါ်လာပါတယ် …
ဒီ ဥပဒေပြုရေး အာဏာ…. အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ထဲမှာ …
ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ …
ဘာဖြစ်လို့ကိုးလိုးကန့် လန့်ဝင်ပါနေရတာလဲ ….???
သူ့ ရည်ရွယ်ချက် က ဘာလဲ ….???
ဘာဖြစ်လို့ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို မပြင်ချင်ရတာလဲ …???
ဘာဖြစ်လို့တပ်မတော်က ဥပဒေပြုရေး အာဏာထဲမှာ …
အမြင်မတော် ၀င်ထိုင် နေချင်ရတာလဲ …???
ဘာဖြစ်လို့ဒီလို ဒီမိုကရေစီ မကျတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့….
နိူင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ….
ဆက်ပြီး ရှိနေစေချင်သေးတာပါလဲ … ???
ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပါ ….
လက်ရှိ တပ်မတော်ရဲ့ သဘောဆန္ဒဟာ …
လက်ရှိအနေအထား မြန်မာ့နိူင်ငံရေး မှာ …
တပ်မတော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် နေရာတစ်နေရာ ….
ဒီ လိုလားချက်ပေါ် အခြေခံပြီး …
ကာလုံတို့တစ်မတ်သားတို့ …
၁၉၄၈ က ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ …
တပ်မတော် ဖြတ်သန်းရတဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာ …
ယမ်းနံ့ ညှော်နံ့နဲ့ သေနတ်သံတွေ …
နိူင်ငံရေး စနစ်တွေ … မူဝါဒအသစ်တွေ ….
နိူင်ငံရေးမှာ တပ်ကို အကြိမ်ကြိမ်ထိုးကျွေးခဲ့တာတွေ …
မအောင်မြင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေ နဲ့ …
ပြည့်နှက်လို့ နေနေ တာပါပဲ ….
၁၉၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက ….
တဂျိမ်းဂျိမ်း စစ်တိုက်နေရတဲ့တပ်မတော်ဟာ…
နိူင်ငံရေးသမားတွေက ဆွေးနွေးလိုက် …
တပ်တွေ နောက်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက် …
တစ်ခါ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်ပျက်လို့ပြန်တိုက်လိုက်နဲ့ ပဲ ….
တောင်ကုန်းတစ်ခုကို သူတို့ သက်စေ့ မက …
အကြိမ်ကြိမ်ပြန်သိမ်းနေရတဲ့ကိစ္စမှာ …
ကျဆုံးသွားတဲ့စစ်သည်တွေရဲ့ အလောင်းဟာလဲ …
အဲဒီတောင်တွေလောက် မြင့်လို့ နေခဲ့ပါပြီ …
တစ်ခါ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ…
စစ်ရေးနည်းနဲ့သူတို့ ကို ဘယ်လိုမှ အနိူင်မယူနိူင်တဲ့…
သူတို့ရန်သူတွေဟာ…
နိူင်ငံရေးနည်း နဲ့လူထုတိုက်ပွဲနည်းနဲ့ …
နိူင်ငံရေးပါတီတွေကို စိမ့်ဝင်ပြီး …
ပူးသတ်ဖို့ ကြိုးစားကြတာကိုလဲ …
သူတို့ ကောင်းကောင်းကြီး တွေ့ မြင်ခဲ့ပြီးပါပြီ ….
သမိုင်း စဉ်ဆက်တစ်လျောက် …
တပ်မတော် အစိုးရိမ်ဆုံး အပူပန်ဆုံးကိစ္စဟာ …
အဲဒီကိစ္စပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
အဲဒီ စိုးရိမ်ပူပန်မှုပေါ် အခြေခံပြီး …
ပြည်တွင်းစစ် မပြီးဆုံးသေးတဲ့….
တပ်မတော် ရဲ့ အနာဂတ် …
တပ်မတော်သားတွေ ရဲ့ အသက်တွေ ….
အများကြီး ဆုံးရှုံးသွားနိူင်တဲ့….
နိူင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်တဲ့ အချိန်မှာ…..
တပ်မတော် ကလဲ နေရာတစ်နေရာ …
ဆန္ဒပြု ပိုင်ခွင့် ရှိသင့်တယ် ဆိုတဲ့….
ခိုင်ခိုင်မာမာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ် ….
၁၉၄၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေး ရစ ကတည်းက …
ယနေ့ အချိန်ကာလ အထိ …
သူ သင်ကြားခဲ့ရတဲ့…
သင်ခန်းစာ အတွေ့ အကြုံ နှစ်ခု ရှိပါတယ် …
ပထမ တစ်ခု ကတော့ …
တိုင်းရင်းသား လူမျိုး ၁၃၅ မျိုး ရှိတဲ့….
ဒီ တိုင်းပြည်မှာ …
ဗမာ လူမျိုးဟာ ရာခိုင်နူန်း ၇၀ လောက် ရှိပါတယ် …
ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ …
မဲများတဲ့သူ နိူင်စတမ်း မို့…
မဲ မျက်နှာ ကြည့်ရတဲ့နိူင်ငံရေးပါတီတွေက …
မဲမျက်နှာပဲ ကြည့်ကြတဲ့အချိန်အခါမှာ…
ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ …
တိုင်းရင်းသားတွေ အတွက် …
ဘ၀င်မကျ မနှစ်မျို့ စရာတွေ အတော်များခဲ့ ရပြီး…
ကာလ ကြာရှည်လာတဲ့ အချိန်မှာ ….
အကြိတ်အခဲ နာကျည်းချက်တွေ ဖြစ် …
အနှစ် ၆၀ ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကို …
အဓွန့် ရှည်စေခဲ့ရပါတယ် ….
ဒီလို ထပ်မဖြစ်စေဖို့ ဆိုရင် …
တိုင်းပြည်အတွက် အန္တာရယ် ရှိလောက်တဲ့ကိစ္စတွေကို …
ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ …
လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရအောင် …
၀င်ရောက် ဟန်ချက်ထိန်းညှိပေးမယ့် …
မဲ မျက်နှာကိုကြည့်စရာမလိုတဲ့...
လူမျိုး ဘာသာ ပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့…
ပြည်တွင်းကုလသမဂ္ဂ လို အဖွဲ့ အစည်းမျိုး တစ်ခု …
လို ကို လိုအပ်လာပါတယ် ….
အဲဒီ အဖွဲ့ အစည်းကတော့ တပ်မတော် ဖြစ်ပြီး …
နိူင်ငံရေး မတည်ငြိမ်သေးခင် ..
ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး မရသေးခင် …
ပြည်ထောင်စု နဲ့ပြည်နယ်တွေကြား …
အာဏာ နဲ့အရင်းအမြစ် ခွဲဝေပြဋ္ဌာန်းမှုတွေ …
အတည် မပြုရသေးခင် အချိန်အထိ …
တပ်မတော်က ၂၅ ရာခိုင်နူန်း ၀င်နေရာယူပြီး ….
ပါတီတွေကို ဟန်ချက် ထိန်းညှိ ထားပေးရမယ်လို့…
တပ်မတော် က အခိုင်အမာ ယူဆထားပုံ ရပါတယ် …
ဒီ အယူအဆ ကို …
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်း …
ဂျပန်နိူင်ငံ မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ …
Channel J ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာ …
ပါမောက္ခ တကာရှီ ရှိရအိရှိ ( တိုကျိူ တက္ကသိုလ် )
ဒေါက်တာ ဖိစစ် ပတ်ကာဆန် ( East Asia Vision Group )
သတင်းထောက် နဂဟာရု ဟာယာဘုစ တို နဲ့…
ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ၊ စစ်မဟာဗျူဟာ လေ့လာရေး ဌာန က …
အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ …
ဗိုလ်မှူးကြီး လှမင်း နဲ့ အင်တာဗျူး အစီအစဉ်မှာ …
ဗိုလ်မှူးကြီး လှမင်း က …
တရားဝင် ထုတ်ပြောသွားတာကို …
တွေ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် …
နောက်ထပ် တပ်မတော် ရဲ့စိုးရွံ့ မှု တစ်ခုက …
ဘာများ ဖြစ်နိူင်ပါသလဲ ….
ပြည်တွင်းစစ် မပြီးသေးတဲ့ကိစ္စကြီးပါပဲ …
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်း အများစုနဲ့…
ယာယီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားတဲ့ အဆင့်ပါ ….
ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ စစ်က ဆက်ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ …
စစ်တပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
စစ်တပ်မှာ မဖြစ်နိူင်လောက်ပါဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့ ကိစ္စ …
တစ်ခုမှ မရှိနိူင်ပါဘူး …
စစ်ကို ရပ်ဖို့ကြိုးစားနေသလို …
မအောင်မြင်ခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အခြေအနေအတွက် …
ကြိုတင်တွက်ချက် ပြင်ဆင်ထားပြီး ဖြစ်မှာ …
မလွဲမသွေ သေချာလှပါတယ် …
လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ….
တပ်မတော် ရဲ့ အနေအထားဟာ…
ဒီ အဖွဲ့ တွေကို …
အရင်လို သိပ်စိတ်ပူစရာ မရှိတော့ပါဘူး …
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေ အနေနဲ့ လည်း …
သူတို့ အနေနဲ့….
တပ်မတော်ကို စစ်ရေးနည်းလမ်းအရ ….
အနိူင်ယူဖို့ မလွယ်တော့မှန်း သိနှင့်ပြီးပါပြီ ….
ဒါဆို နည်းလမ်း တစ်ခုပဲ ကျန်ပါတော့တယ် …
အာဏာရလာဖွယ် ရှိတဲ့နိူင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး …
တပ်မတော် ကို အင်အားချိနဲ့ အောင် လုပ်ဖို့…
ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့ကိစ္စပါ ….
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ဆင်လိုက်ရင် …
တစ်မတ်သားတွေကို လွှတ်တော်ထဲက ထုတ်မပြစ်ဘူး …
ဘယ်သူ အာမခံပါသလဲ …
တစ်မတ်သားတွေ လွှတ်တော်ထဲက ဖယ်ပေးလိုက်ရရင် …
တပ်မတော်ရဲ့စစ်အင်အား ဘတ်ဂျက် တို့ ကို ထိန်းချုပ်တဲ့…
ဥပဒေတွေ ပေါ်ထွက်မလာဘူးလို့…
ဘယ်သူ အာမခံပါသလဲ ….
ကျွန်တော် အမြဲ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်…
ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမှာ …
ပြည်ထောင်စု နဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့ အာဏာခွဲဝေမှု …
ဇယား ၁၂၃ ပါ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ် ..
ဒီ ဇယားကို ပြင်လိုက်တာနဲ့…
ပြည်နယ်တွေ နဲ့ပြည်ထောင်စု အကြား …
တင်းမာမှုတွေ လျော့သွားမယ် ..
စစ်ကို အပြီးသတ်ဖို့နီးစပ်လာမယ် …
စစ်ဘောင်ချုံ့ လို့ ရပြီ …
စစ်ဘောင် ကျုံ့ သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် …
စစ်တပ် ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ …
တဖြည်းဖြည်း လျော့ကျသွားရမှာ …
ဒါတွေ အရင်မလုပ်ဘဲ …
အနှစ်၆၀ စစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့…
လက်နက်ကိုင် နှစ်သိန်းနီးပါးရှိတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ …
စစ်တပ်ကိုပဲ တစ်ဖက်သတ် …
သွားထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားတာသည် …
သဘာဝ မကျပါဘူး လို့ …
ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်…
ဒီ ဇယား ၁၂၃ ကို ပြင်ဖို့…
အဓိက အာရုံမစိုက် သေးပါဘူး….
၄၃၆ တို့၅၉ စလုံးတို့…
ဒါတွေပဲ တရုန်းရုန်း လုပ်နေတာပါ….
မှားတာ မှန်တာတွေ အသာထား …
အခုလုပ်နေတာတွေဟာ လက်တွေ့ ကျလား …???
တစ်ဖက် က လက်ခံမှာလား … ???
အသေအချာ ပြန်စဉ်းစား ကြည့်ပေးပါ ….
စစ်ကို အရင် အပြီးမသတ်ပဲ …
စစ်တပ်ကို သွား ထိန်းချုပ်ကန့် သတ် မယ့် ကိစ္စဟာ ….
၂၀၁၄ ရဲ့ရယ်စရာအကောင်းဆုံး …
စဉ်းစားလို့ ရအောင် တစ်ခုထောက်ပြရရင် …
သမ္မတက ကချင်ပြည်မှာ …
အင်အားကို ကန့် သတ်တားမြစ် …
စစ်တပ်က ငုတ်တုတ်ဖြစ်နေတာ ....
စစ်သားတွေ ဘက်က …
မကျေနပ်တဲ့ အသံဗလံတွေ …
အတော်များများ ထွက်ပေါ်စပြုလာတာ ….
အားလုံး အသိပါပဲ …
ဒါတောင် သမ္မတဟာ ….
ဒီထက်ရှင်းအောင် ဒဲ့ ပြောရရင်တော့ …
လွှတ်တော်ထဲက တစ်မတ်သား နဲ့ကာလုံကို ...
သူတို့ စစ် တိုက်နေတုန်း …
သူတို့ ရန်သူတွေက နိူင်ငံရေးပါတီတွေ နဲ့ ပေါင်းပြီး …
သူတို့ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးခံရတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာမှာ …
သူတို့မလိုလားတာပါပဲ …..
( ဥပမာ - UNFC နဲ့ဒေါ်စုနဲ့ ....
ဘာတွေဆွေးနွေးလို့ ဆွေးနွေးထားမှန်း မသိတဲ့ ကိစ္စ )
ဒီ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြင်ဖို့ ခက်အောင် လုပ်ထားတဲ့ …
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပြင်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် …
သူတို့ စိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စတွေ ဆင့်ကဲ ဆက်ဖြစ်လာတော့မှာပါ ….
ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို အပြင်မခံနိူင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ ။
15:20 မြင်သမျှ ပြောမည် No comments
သတင်းထောက် ကိုပါကြီး ကိစ္စပေါ်လာတော့ …
ပထမဆုံး ၀င်ကြည့်မိတာ …
သူ့ မိန်းမ မသန္တာရဲ့time lime ပါ ….
အရမ်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ် …
တပ်က ညီလေး တစ်ယောက်ကျဆုံးသွားတုန်းက …
သူ့ မိန်းမ ပုံလေးမြင်ပြီး ကြေကွဲခဲ့ရတာထက် …
မလျော့သော ၀မ်းနည်းခြင်းမျိုးနဲ့ ပါ ….
မှတ်ချက်တွေ ကောမန့် တွေ ဖတ်ရတဲ့ အချိန်မှာ …
ဖြစ်စဉ်ကို အမှန်အတိုင်း သိရဖို့ …
ကျွန်တော် နိူင်သလောက် စွမ်းသလောက် …
အစွမ်းကုန် လိုက်စုံစမ်းမိပါတယ် ….
တယ်လီဖုန်း Call ပေါင်း မြောက်များစွာ …
ကျွန်တော် လိုက်ဆက်ပါတယ် ….
ဖေ့စ်ဘုတ်က တပ်မတော် ဂရုတွေမှာ Status တင်ပြီး …
ရတခ နဲ့ စစ်ရုံးက သူတွေကို …
ဖြစ်စဉ် သတင်းအချက်အလက်တွေ လိုက်မေးပါတယ် …
နောက်ဆုံးတော့ အချက်အလက်တွေ ...
တဖြည်းဖြည်း စုဆောင်းမိလာပါတယ် ....
ကျွန်တော် သိရသလောက် …
ဒီလို ဖြစ်ပါတယ် …
၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ မှာ
မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့အနီး မှာ…
KKO အဖွဲ့မှ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိ ...
စောဝင်းဇော် ခေါင်းဆောင် အင်အား ၂၀ ဦးခန့် ....
လက်နက်ငယ်များ ကိုယ်စီကိုင်ဆောင်လျက် ....
ရောက်ရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ ပါတယ် ....
ကျိုက်မရောမြို့ နယ်မြေခံတပ် နဲ့....
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့ သွားရောက်ပြီး ....
မြို့တွင်းကို လက်နက်ကိုင်ဆောင် ...
၀င်ရောက်ခြင်း မပြုဖို့ ပြောကြားခဲ့ရာ မှာ …
KKO အဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကို
လက်နက်များဖြင့် ချိန်ရွယ် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ် ….
အဲဒီ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ ပြန်မရောက်လာလို့…
ကျိုက်မရောမြို့ တပ်ရင်းဌာနချုပ် မှာရှိ တဲ့…
လုံခြုံရေးတပ်စိတ်တစ်စိတ်က ထပ်လိုက်သွားပါတယ် …
ဖြစ်စဉ် နေရာကို မရောက်မီ …
အသင့် စောင့်ဆိုင်း နေရာယူထားတဲ့…
KKO အဖွဲ့မှ လက်နက်ငယ်တွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး...
လိုက်လံ ပူးပေါင်းတဲ့တပ်စိတ်ရဲ့ ...
လက်နက် ခဲယမ်းတွေကို သိမ်းဆည်းကာ ....
ကျိုက်မရောမြို့ အရှေ့ ဘက်ရှိ ...
အတ္ထရံမြစ်ကို ဖြတ်ကူးပြီး ....
အရှေ့ဘက်ကို ဆက်လက် ထွက်ခွာသွားပါတယ် …
ဆုတ်ခွာသွားတဲ့အဖွဲ့ တွေ နောက်ကို …
အဲဒီ ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ….
စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ထုတ် ...
The Messenger နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာအပါအ၀င် ....
ဂျာနယ်နှင့် သတင်းစာအချို့မှာ ...
သတင်း ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ် …
စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့၁၉၃၀ အချိန်မှာ
ကျိုက်မရောမြို့ လုံခြုံရေးအတွက် …
ဗိုလ်ကြီး စိုးဇေယျာလင်း ဦးစီး တပ်စု ၁ စုနှင့်
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ ပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာ ….
မြို့စက်လှေဆိပ် အ၀င်/အထွက် များကို စစ်ဆေးနေစဉ်မှာ ...
စက်လှေ ၁ စီးပေါ်မှာ ရေစိုလျက် ....
ရွှံ့ဗွက်များ ပေကျံနေတဲ့....
မသင်္ကာဖွယ် အမျိုးသား ၁ ဦးကို တွေ့ရှိလို့....
နယ်မြေခံ အမှတ်(၂၀၈) ခြေမြန်တပ်ရင်းကို ...
အဲဒီ အမျိုးသားကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ...
ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်ကြီးအောင်နိုင် ဖြစ်ပြီး...
ကျိုက်မရောဖြစ်စဉ် မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့...
စောဝင်းဇော် အဖွဲ့ကို ...
ရွှေဝါချောင်ကျေးရွာမှာ စောဆန်းအောင်နှင့် အတူ ...
သွားရောက်တွေ့ဆုံ ပူးပေါင်းခဲ့သူ ....
ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် …
၄င်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေ အရ ....
ကျိုက်မရောမြို့ ဖြစ်စဉ်မှာ ...
KKO စောဆန်းအောင် အဖွဲ့က ...
သိမ်းဆည်းသွားခဲ့တဲ့လက်နက်တွေထဲက တစ်ချို့ ကို ...
စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ ....
၄င်းနေရာ အနီးတစ်ဝိုက် မှာ ၀ှက်ပြီး ....
ထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ် …
နယ်မြေခံ တပ်မှာ ....
ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးအောင်နိူင်ကို …
စောဆန်းအောင်အဖွဲ့ ကို ပိတ်ဆို့ ရှင်းလင်းနေတဲ့....
အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့မှာ...
လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့ပါတယ် ….
အဲဒီနေ့ မှာပဲ ....
ရွှေဝါချောင်ကျေးရွာ အနီးတစ်ဝိုက် ....
ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့ရာမှာ …
တပ်မတော်မှ သိမ်းဆည်းခံလိုက်ရတဲ့…
လက်နက်ငယ် ၃ လက်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး
ကျန်လက်နက်များကို ဆက်လက်ရှာဖွေဖို့…
ရွှေဝါချောင်းကျေးရွာ ရဲ့ တောင်ဘက်
မီတာ ၁၀၀၀ ခန့်အကွာမှာ ညအိပ်အခြေပြုနေစဉ် ...
ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှာ ...
ဗိုလ်ကြီးအောင်နိုင်က အပေ့ါသွားဖို့ခွင့်တောင်းရင်း...
ရုတ်တရက် ကင်းစောင့် စစ်သည်ကို လုံးထွေးပြီး...
သေနတ်လုယူ ထွက်ပြေးဖို့ ...
ထိုသို့ ကြိုးပမ်းစဉ်မှာ …
ကင်းစောင့်စစ်သည်က ပစ်ခတ်တဲ့ အတွက်...
သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးခဲ့ပါတယ် …
သေဆုံးသူရဲ့ အလောင်းကို ...
ရွှေဝါချောင်ကျေးရွာရဲ့....
တောင်ဘက် မီတာ ၈၀၀ ခန့်အကွာမှာ....
ကောင်းမွန်စွာ မြေမြုပ်သဂြိုလ်ခဲ့တယ်လို့....
ဒါ ကျွန်တော် စုံစမ်းရသလောက်ပါ ....
ဒါဆို ကိုပါကြီးဟာ ....
သတင်းထောက် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး ...
ကွယ်လွန်သူရဲ့ ဇနီးကို တော့ ...
အများကြီး အားနာ စိတ်မကောင်းကြောင်း ...
ဒီစတေးတပ်စ်ကို ရေးမိတဲ့ အတွက် .....
ပြောကြားလို ပါတယ် ......
( Photo - The Voice Daily )